Global Voices teny Malagasy » Inona no itovian’ny fanjonoana krila sy ny fitrandrahana ny hazo santal? · Global Voices teny Malagasy » Print
Inona no itovian'ny fanjonoana krila sy ny fitrandrahana ny hazo santal?
Voadika ny 27 Jolay 2018 11:21 GMT 1	 · Mpanoratra Samuel Maina Nandika (fr) i Fabienne Flessel, imanoela fifaliana
Sokajy: Kenyà, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Araka ny fijerena azy voalohany, tsy misy itoviany ny krila sy ny hazo santal  : ny iray biby an-dranomasina ary ny iray zavamaniry an-tanety. Raha maka fotoana tsara mandinika ny toe-javatra mafy iainan'ireo karazany roa ao anatin'ny karazana zavamananaina ireo, hahita fa misy ihany ny itoviany.
Hazavain'ny profesora Richard Leakey  [amin'ny teny anglisy] ao amin'ny blaoginy, taorian'ny fodiany avy tamina iraka tany amin'ny Tendron-tany Atsimo  [amin'ny teny anglisy], fa nametraka fomba tena mahomby ahafahana manjono ny krila ilay ekolojista kenyana fantatra maneran-tany. Manome antoka ny hanaovana jono tsara ho an'ireo sambo afaka mitondra lanja aman-taoniny amin'ity hazandrano bitika kely ity izany, izay ny vokany voalohany dia ny fihenana malakin'ireo loharanon-karena. Manana toerana fototra amin'ny fototsakafon'ny ankamaroan'ny biby an-dranomasina manana hazon-damosina ny krila.
Araka ny Pr Leakey, mikitika ny rojon-tsakafo ny fanjavonan'ity sakafo fototra ao an-dranomasina ity ary misy vokany ratsy ho an'ireo biby lehibe indrindra sy fantatra kokoa, ao an-tampon'ny kitsolohan'ny sakafo (pyramide alimentaire), toy ny trozona, feso, pengoana ary ny elefantan-dranomasina. Manampy izany ny fitambaran-dratsin'ny fiakaran'ny hafanana sy ny fiovan'ny toetrandro izay tena mampidi-doza ny fahveloman'ireo karazana zavamananaina dia ao amin'ny Tendrontany Atsimo. Manoratra miasika izany ny Pr Leakey [amin'ny teny anglisy]:
Nahazo vaovao manaitra iray hafa aho : miha-mihena ny krila, ilay fototsakafo ao amin'ny rojon-tsakafon'ny (chaîne alimentaire) biby manana taolan-damosina. Raha tena miasa mafy ho amin'ity fihenana ity ny fiovan'ny toetrandro sy ny vokany amin'ny ranomandry, tsy maintsy ampangaina koa ny jono krila atao tafahoatra natombok'i Japana androany. Notaterina tamiko fa nisy vokany tena manimba be ny demografian'ilay karazana zavamananaina ireo fomba vaovao fanjonoana ny krila, izay mamokatra lanjany aman-taonina lehibe kokoa. Mila mivonona koa amin'ny fiantraikany amin'ny fahaveloman'ireo karazana hafa ao amin'ny faribolan'ny biby, any antampon'ny rojon-tsakafo.
Sorona amina fitrandrahana diso tafahotra loatra ihany koa ny hazo santal, toy ny asehon'ny ohatra kenyana nosafidian'ny blaogy Saving Kenya's Forests blog  (Mamonjy ireo ala ao Kenya) [amin'ny teny anglisy]. Afaka vakiana ao amin'ny blaogy ny hoe :
Miatrika ny fanjavon'ny hazo santal (Osyris lanceolata) i Kenya, lasibatr'ireo fanapahana tsy ara-dalàna. Toa nikisaka nankany amin'ny toerana avo ireo fanapahana ireo, voalohany hita tao amin'ny vohitr'i Chyulu ary afaka mahita izany ao Kajiado, Taita, Amboseli sy any amin'ny fitrandrahana hafa koa isika, ary koa ao Samburu, Koibatek, any amin'ny hantsambaton'i Kikuyu sy faritra hafa koa. Any amin'ny ankamaroan'ireo toerana ireo, tena zara raha voaara-maso ireo fanapahana hazo ireo.
Ampiasaina indrindra ny hazo santal mba hanamboarana menaka hanitra avy amin'ny fon'ilay hazo, rantsana reniny sy ny fakany. Mbola araka ilay blaogy ihany, iarahana manao amin'ny Tanzania ny fivarotana ilay hazo ary aorian'ny fikarakarana amin'ny ampahany, aondrana ”mankany Indonezia, India, Afrika Atsimo, Frantsa, Alemaina sy ireo firenena ao Azia Atsinanana ho an'ny indostrian'ny fikarakaràna hatsaran-tarehy sy mpanamboatra fanafody.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/27/123295/
 krila : http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphausiacea
 hazo santal: http://fr.wikipedia.org/wiki/Santal
 Richard Leakey: http://richardleakey.wildlifedirect.org/
 Tendron-tany Atsimo: http://richardleakey.wildlifedirect.org/2009/02/03/climate-change-and-japans-krill-fishing-are-devastating-the-antarctic/
 Saving Kenya's Forests blog: http://kenyaforests.wildlifedirect.org/2009/02/02/perfumery-sends-sandalwood-numbers-down/